Indlela yokwandisa inani lezixhumanisi zangaphandle?
Ama-Backlink ahlala ezinkomba ezinkulu zokukhishwa kwekhwalithi yewebhu, ukufaneleka, kanye negunya. Bakhombisa i-Google ukuthi kudingeka yini ukukala leli webhusayithi kwi-TOP noma cha. Izixhumanisi zangaphandle eziphezulu zithinta ngqo isayithi lakho kumiphumela yosesho. Kodwa-ke, akulula ukuthola ijusi lokuxhumanisa kusuka kumawebhusayithi aphezulu we-PR uma usanda kumasha emakethe ye-digital. Emithonjeni yewebhu encane noma esanda kusungulwa, ukwakha kabusha ama-backlink kungabonakala kunamaqhinga, kanti konke okubizwa ngokuthi "okulula futhi okusheshayo" kuhambisane nezinkombandlela ze-Google futhi kungabangela i-rankings yehla - registrar dominio.com.br. Ngaphezu kwalokho, uma wakha izixhumanisi ngendlela ebonakala enolungele izinjini zokusesha, usengozini yokuthola izigwegwe kusuka ku-Google.
Namuhla, sizokhuluma ngendima ye-backlink ekukhuthazeni kwebhizinisi e-intanethi futhi ukhulume ngamanye amasu ungathola ijusi lokuxhumanisa elibhekiswe ngaphezulu.
Kungani udinga ama-backlink?
Ngokuvamile, i-backlink yilapho omunye umthombo wewebhu webhulogi yakho. Uma le webhusayithi inenani elithile kubasebenzisi futhi ithathwa njengokugunyazwa yizinjini zokusesha, izixhumanisi ezitholakala kuzo zizoletha esakhiweni sakho sekhwalithi yesayithi. Noma kunjalo, uma ufaka isixhumanisi ku-spammy, umthombo wewebhu osanda kuhlawulwa, ithuba lakho lokuthola ijusi lokuxhumanisa liphansi kakhulu. Izixhumanisi zekhwalithi ezingaphezulu zikhomba isayithi lakho, igunya lakho elingaphezulu isizinda sakho sizothola kusuka kuzinjini zokusesha.
Kufanele uqaphele izinhloso ezehlukene zezixhumanisi zangaphandle njengoba uzothola imiphumela ehlukene kulolu hlobo olunye lwe-backlink. Izixhumanisi ziyahlukahluka kuye ngokuthi yiqiniso yini ukuthi nguwe oxhuma noma oxhunyaniswe naye.
Ngakho ake sibhale ezinye izinzuzo ezisekela kumawebhusayithi ethu:
Ama-backlink athumela ithrekhi kusayithi lakho
ekwakheni umkhankaso wokwakha umxhumanisi wekhwalithi, uthola ithrafikhi kusuka eminye imithombo yewebhu njengabasebenzisi abafunda okuthunyelwe ngokuxhumanisa kwakho ukuze uchofoze ulwazi oluthe xaxa.
Ama-backlink aletha igunya kwisayithi lakho
I-backlink isebenza njengevoti labanye ababhulogi futhi isitshela izinjini ngegama elihle kakhulu negunya isizinda sakho. Isebenza ngokugcwele njengokuthuthukiswa kokwaziswa komkhiqizo wakho.
Uthola ukuqaphela ngamanye abanikazi bewebhu
Uma ufaka isixhumanisi kusayithi lakho elibhekisela kwelinye isizinda, umnikazi waleso sayithi uzobona lolu lwazi nge-software yakhe yokuhlaziya (f. e. I-Semalt Web Analyzer noma i-Google Analytics). Kuyithuba elihle kuwe ukuthola enye imithombo ye-niche ehlobene newebhu ukuze uqaphele isizinda sakho futhi uhlele ubuhlobo obuhle bebhizinisi nawe.
Indlela yokwandisa inombolo ye-backlink?
Hlela okuthile okuyingqayizivele
Ukuze uthole izixhumanisi ngokomzimba, udinga ukukhiqiza okuqukethwe okuyingqayizivele nokubandakanya. Noma kunjalo, bonke abanikazi bewebhusayithi behlakaniphile bakha okuqukethwe kwekhwalithi, futhi ungase ulahleke phakathi kwezinye iziqephu. Ungazama ukusondela amagama akho angukhiye aphezulu kakhulu okuqukethwe okuhlukile kakhulu kwabanye. Uma ungakwazi ukunikeza izethameli zakho ezihlosiwe ngento entsha, abasebenzisi abaningi cishe bazoyibelana nabanye kanye nabanye ababhulogi bazokwazi ukwazi ngomkhiqizo wakho.
Ukuxhumanisa kwamanye ama-bloggers kuyithuba elihle kakhulu lokuthola ama-backlink ngaphezulu ngokwakho ngoba ufinyelela ku-radar lezo blogs. Uma uxhuma kwabanye abantu, kungenzeka ukuthi uthole amasheya, isixhumanisi, nokukhuthazwa okuphilayo.